Linux App Summit: izvo zvaunoda kuziva nezve chiitiko | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchifarira kubatsira kugadzira GNU / Linux chikuva chakakura chevashandisi vekupedzisira, saka pamwe unofanirwa kunyora pasi zita remutambo. Linux App Musangano uye chengetedza iwo mazuva aNovember 12-14, 2020 mukarenda yejenda rako. Uye kunyangwe iine nzvimbo yakatarwa (Barcelona, ​​Spain), chiitiko chichava online nekuda kwenguva dzedenda matinogara takanyudzwa.
Kana iwe uchida kuziva zvese izvo, iwe unogona kushanya saiti yepamutemo kubva kuLinux App Summit. Chiitiko chine varidzi ma greats maviri anozivikanwa kune vese, sezvo vakashanda pachiri KDE uye GNOME kugadzirira zvese uye kugadzira Linux nharaunda iri nani mune ramangwana.
Ini ndinofunga tichafanirwa kujairira zviitiko zvepamhepo kudzamara paine mhinduro yechirwere cheSARS-CoV-2. Pasina mushonga unovimbika panguva ino, uye pasina kurapwa, zviitiko zvakakura zvine njodzi huru. Kunyangwe zvakadaro pavanounza pamwechete vanhu vanobva munyika zhinji ...
MuLAS iwe unowana kuwanda kwezviitiko zvinonakidza, senge akawanda e hurukuro dzinonakidza. Misoro ichafukidzwa ndeyekusika, kurongedza, kugoverwa kwemaapps, hunyanzvi, kuita mari muLinux ecosystems, uye zvimwe zvakawanda.
Uye zvakare, ivo vachangobva kuzivisa kuti yavo "Shevedza Hurukuro" Iyo yakavhurika uye iwe unogona kujoina uye nekupa mazano kusvika munaGunyana 15. Ivo vakasarudzwa vachaziviswa muna Gumiguru 1 yegore rino.
Vanokurudzirawo vatauri vatsva, uye kwete chete avo vatova neruzivo muhurukuro dzakapfuura. Saka kana iwe uine zano rakanaka, ndizvo zvese zvaunoda kujoina iyo Linux App Summit.
Iva mumwe wevaya vanozoita imwe yehurukuro mune izvi chiitiko chepamhepo, kana kungori bato rinofarira, rangarira kuti munaNovember une musangano wekunakidzwa kubva kudivi kana rimwe (kana zvese zviri zviviri) zvese zviri kupihwa pano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Misangano / Zviitiko / Hurukuro » Linux App Summit: izvo zvaunoda kuziva nezve chiitiko
SimulIDE: yako yaunofarira zvemagetsi simulator ... kubva ikozvino